Ixesha le-Fireworks liza kunyuka, ngoko ke ngaphambi kokungena kwiiprojekthi ezitsha zomlilo, ndifuna ukufihla ukusetyenziswa kweekhemikhali eziqhelekileyo ezisetyenziselwa i-pyrotechnics: i-ammonium nitrate. Enye iphrojekthi ejabulisayo ukuzama nge-ammonium nitrate kukukwenza ukupheliswa komzimba. Ungathenga i-ammonium nitrate njengokhemikhali ecocekileyo okanye unokuyiqokelela kwiipakethe ezibandayo okanye ezinye izichumisi. Unokwenza i-ammonium nitrate ngokusabela i-nitric acid nge-ammonia, kodwa ukuba awukwazi ukufikelela kwi-nitric acid (okanye ungafuni ukuyilahla nayo), unokwenza i-nitmoni yammonium kwiikhemikhali zasekhaya ezifumanekayo.
Ammonic Nitrate Chemicals
138 g i-bisulfate ye-sodium (efumaneka ngamachiza e-pool, asetyenziswe ukunciphisa i-pH)
1 i-mole elinganayo netyuwa ye-nitrate ... nayiphi na elandelayo
85 g i-nitrate ye-sodium (ukugcinwa kokutya okuqhelekileyo)
101 g nitassium nitrate (ongayithenga okanye uzenze )
118 i-calcium nitrate (i-tetrahydrate)
i-ammonia (uhlambulukile wendlu oqhelekileyo)
i-methanol (ngokuzikhethela, enokufunyanwa njengonyango lwe-HEET yamafutha)
Lungisa i-Ammonium Nitrate
Dissolve i-bisulfate ye-sodium kwimininum yamanzi (malunga ne-300 ml).
Dissolve ityuwa yakho ye-nitrate kwixabiso elincinci lamanzi (inani lixhomekeke kwityuwa).
Hlanganisa izicombululo ezimbini.
Emva koko ufuna ukuphelisa isisombululo, esicacile. Gxuma kwi-ammonia de i-pH yomxube u-7 okanye ngaphezulu. Sebenzisa i-pH yamitha (okanye iphepha le-pH ). Ukuphendula i-ammonia, i-sodium i-bisulfate, ne-nitrate iya kukunika i-sodium sulfate kunye ne-nitrate yam nitrate.
I-sulfate ye-sodium kunye ne-nitrate ye-ammonium ine-solubility ehlukeneyo emanzini, ngoko ubilise isisombululo sokufumana i-sulfate ye-sodium. Susa umbane kwindawo yokushisa xa iifridi zesimo se-sulfate ifom ephantsi kwe-pan.
Gweba isisombululo kwifriji ukuze ufumane i-sulfate ye-sodium eninzi kangako ukukhupha isisombululo.
Yenza isisombululo ngecebo lokucoca (ifowuni yefowuni okanye iipilisi zamaphepha) ukuze uhlukanise i-sodium sulfate eqinile kwisisombululo se-ammonium nitrate.
Vumela isisombululo se-ammonium nitrate ukuba siphambuka, esiza kukunika i-ammonium nitrate, kunye ne-sodium sulfate ukungcola. Oku 'kukuhle ngokwaneleyo' kwiiprojekthi ezininzi zeekhemistri.
Ukuba ufuna ukuqhubeka uhlambulula i-nitmonium nitrate, yichitha malunga ne-500 ml ye-methanol. I-nitmonium nitrate inqabile kwi-methanol, ngelixa i-sodium sulfate ayikho.
Yenza isisombululo ngefayile, eya kukunika i-sodium sulfate kwisihlunu kunye nesisombululo se-nitmonium nitrate.
Vumela i-methanol ukuba ikhuphuke kwisisombululo ukufumana i-crystalline i-ammonium nitrate.
Iikhemikhali ezisetyenziswe kule projekthi zivumba kwaye zihlaziye, ngoko ke le projekthi kufuneka yenziwe phantsi kwendawo yokuvutha komlilo okanye ngaphandle. Njengamaxesha onke, gqoka iiglavu, ukukhusela kwamehlo, kunye nezambatho ezifanelekileyo. Ezinye ze-reagents kunye nemveliso yokugqibela iyatshisa okanye i-oxidizers, ngoko gcina amakhemikhali kude namatye avulekileyo. NurdRage inevidiyo ebalulekileyo ye-YouTube echaza amanyathelo ale mpendulo kwaye ikubonisa oko ungalindela endleleni.
Yenza ipaki ekhuselekileyo kwi-Hot Ice
10 Iimpawu zeMichiza ezimangalisayo
I-Baking Soda Stalactites kunye ne-Stalagmites
Indlela yokwenza i-Rock Candy
Indlela yokwenza umsi womsi womlilo ongeyingozi onobungozi obunobuthi
IiProjekthi zeSayensi zeeholide
I-Quitten Liquid I-nitrojeni
Indlela yokwenza iNitrate ye-Potassium
Dissolve Styrofoam kwi-Acetone
Iiprojekthi zeeNzululwazi zeNzululwazi
I-Rubber Chicken Bone Bone Test
Iingcamango zeProjekthi yeSayensi yeNzululwazi: Amafu
Ukukhwela i-Skateboards kwiShintsho
Nantsi impahluko ebalulekileyo phakathi "Umntu" kunye no "Estar"
Indlela yokuba nobuhlobo obusondeleyo noThixo
Iincwadi ezili-10 ze-Conservative Non-fiction Books
IiNtsapho eziyi-15 zaseCarnivore
Iimpawu zeeLatin zesiLatini: Ukubonisa, ukuPhatha kunye nokuHlanganisa
Ukuqulunqa Inkcazo kunye nemizekelo
"Ukutya okubi" - Ukungabikho kwememori yokudlala
Isingeniso kwiDathaSet kwiVB.NET
I-Castanet I-Instrument Controll
I-10 I-Best Best Oldies Albums
Iikhathuni zezopolitiko zeveki
I-Utah Valley University Admissions
Kutheni Umntu Wentlanga Wayenayo IBhayibhile?
UbuBuddha eJapan: Imbali emfutshane
Ukugqithisa umzimba wakho weeTekisi eziyingozi
I-Melting Point Inkcazo
Itheyibhile yeTable - Indlela yokudlala ngeempuphu ezimfutshane
Isikhokelo Esikhawulezayo sokusebenzisa i-Ruby Environmental Variables
Ziziphi iimpawu eziphambili zeRobot ze-All Time?
IziKhozo ezisiNto eziNcedisayo Ukucacisa uMninimandla kaDonald Trump